Nandravarava an'i Puerto Rico ny horohoron-tany, manimba ny toerana mahasarika mpizahatany
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nandravarava an'i Puerto Rico ny horohoron-tany, manimba ny toerana mahasarika mpizahatany
Horohoron-tany mafy no rava Puerto Rico, niaraka tamin'ny fianjeran'ny trano, nianjera ny fiara ary ny lalana feno vato sy potipoti-javatra - toa vokatry ny fihotsahan'ny fotaka.
Maro ny mponin'ny nosy no tsy nanana herinaratra taorian'ny horohorontany nahatratra 5.8.
Tsy nisy ny fanairana momba ny tsunami ary tsy nisy ny aina nafoy.
Ny horohoron-tany androany dia voalaza fa iray amin'ireo lehibe indrindra namely ny faritanin'i Etazonia.
Raha ny filazan'ny mponina iray teo an-toerana dia iray amin'ireo horohoron-tany mafy indrindra io hatramin'ny nanombohany nihorohoro tamin'ny 28 Desambra.
Ny faritra atsimon'i Pôrtô Rikô dia niharan'ny horohoron-tany kely kokoa, hatramin'ny 4.7 ka hatramin'ny 5.1, hatramin'ny faran'ny volana desambra.
Manintona mpizahatany malaza - andohalambo vato, fantatra amin'ny anarana hoe Punta Ventana, no nirodana taorian'ny horohoron-tany nanenjika ny nosy. Ny fananganana vatolampy Punta Ventana, miorina manamorona ny morontsiraka atsimo amin'i Puerto Rico, dia tena tian'ny mpitsidika an'i Puerto Rico.
Ny ben'ny tanànan'i Guayanilla, Nelson Torres Yordán, dia nanamafy fa Punta Ventana, izay "iray amin'ireo fisarihana fizahan-tany lehibe indrindra an'i Guayanilla" dia rava.
Puerto Rico dia mbola manarina Rivo-doza Maria, tafio-drivotra sokajy faha-5 izay nandrava ny faritra sasany tany Karaiba tamin'ny volana septambra 2017. Tombanana ho 2,975 no namono ny rivodoza ary niteraka fahavoazana $ 100 miliara.
8 Antony tokony handinihanao mpitsabo mpanampy
'Sushi King' any Japon dia mitentina 1.8 tapitrisa dolara amin'ireo trondro tuna ONE